Iphrofayili yenkampani - I-Shenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd.
Shenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd. ibhizinisi elisezingeni eliphakeme lombuso elinezinto ezithuthukile zokukhanyisa nezibani ze-LED. Ngo-2012, i-Lightman imisa ifektri ye-OEM "I-LED Panel Lighting Co, Ltd." lokho kwenza i-OEM i-oda ezinkampanini zokukhanyisa zasekhaya nezakwamanye amazwe. Le nkampani ibheka ubuchwepheshe bekhanyisi yokukhanyisa iphaneli ye-LED futhi inikeza umugqa ophelele wezixazululo zokukhanyisa iphaneli ye-LED.
Sakha ithimba eliqinile le-R&D elakhiwe ngabasebenza ngokushisa, ngamehlo, ochwepheshe bakwagesi abanokuhlangenwe nakho okucebile ocwaningweni lobuchwepheshe, ukukhiqiza, ukuphatha njll. Abasebenzi abaqeqeshiwe kakhulu baqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu iqinisekiswe ikhwalithi ephezulu. Ukuthengisa okusemthethweni kulandelela namakhasimende ethu nganoma yisiphi isikhathi. Umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo othuthukile, amathuluzi we-photoelectric, imishini yokufaka ye-ASM kanye nethuluzi lokuhlola, kusenza sikwazi ukuhlinzeka ngekhwalithi ephezulu, ukuqina okuphezulu nemikhiqizo esebenza kahle kakhulu.
Sakha ukubambisana nabathengisi abaningi bezinto eziwumbala kanye nabakhiqizi emhlabeni, njenge-MITSUBISHI, SAMSUNG, EPISTAR, CREE, BRIDGELUX, ATMEL, PHLIPIS, OSRAM, ON SEMICONDUCTOR, MEANWELL njll.
Iningi lemikhiqizo yethu ekhanyayo yamaphaneli athola i-UL, CUL, DLC, CE, ROHS, FCC, TUV, GS, SAA ne-EMC izitifiketi, futhi athunyelwa kakhulu eYurophu, eNyakatho Melika, eJapan, e-Australia, eSouth America, emazweni ase-Asia nasezifundeni. . Ngekhwalithi enhle nensizakalo, sithola ukwethenjwa okukhulu nodumo kumakhasimende ethu asekhaya nakwamanye amazwe futhi sakhe isithombe esihle somkhiqizo nodumo embonini yezokukhanyisa i-LED.
Ngezansi kunethiwekhi yokukhanya yomhlaba wonke elula: